Home News Senator Faroole oo weerar Culus kuqaaday Culumada Soomaaliyeed
Senator Faroole oo weerar Culus kuqaaday Culumada Soomaaliyeed
Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (Faroole) oo ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya ayaa maanta weeraray Culumada Soomaaliyeed, kuwooda siyaasadda ku dhex milmay.
Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud oo ka hadlayay kulanka 1-aad ee Kalfadhiga 45-aad ee Baarlamaanka Puntland oo maanta ka furmay Magaalada Garoowe ayaa sheegay in Culumada looga baahan yahay inay Kitaabka iska dhigaan, soona qaataan midka siyaasadda.
Waxaa uu sheegay inaanay ka yeeli doonin inay Masaajida ka soo farmuuqaan siyaasiyiinta, haddii kalena inay iyana farta ku fiiqayaan, isla-markaana ay iska celin doonaan.
“Culumada Waxaan leeyahay hadfaad siyaasad rabtaan Kitaabka meel soo dhigta, midka siyaasadda soo qaata, laakiin idin ka yeeli mayno in aad masaajidada dadka faraha kaga fiiq fiiqdaan, idinkana waa la’idinku fiiqayaa waana iska kiin celinayna anba sheekh baan ahay ima harawsan kartaan.” Ayuu yiri Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud.
Waxaa uu Culumada Soomaaliyeed uu ugu baaqay inaanay ka hadlin siyaasadda dalka, gaar ahaan midda Puntland, haddii kalena ay taggi doonto in iyagana la dhaliilo.
Senator Faroole oo horey u soo noqday Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo sida uu sheegay dhibaatooyin ku haya Puntland, kuwaa oo sida uu ka dhawaajiyay loo baahan yahay in la’iska qabto.
Senator Faroole ayaa dadka reer Puntland kula taliyay in si wadajira loo ilaaliyo midnimada shacabka Puntland iyo jiritaanka maamulka ay leeyihiin.
Waa markii ugu horeysay oo Senotarka Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya ka tirsan uu weerar afka ah ku qaado Culumada Soomaaliyeed, ee sida joogtada ahi kaga hadasho arrimaha siyaasadda ee dalka.